Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Galmudug oo siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Galmudug oo siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii Madaxweyne Farmaajo
Xildhibaanno katirsan Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii xalay ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka jeediyay munaasabadda xuska 15ka May islamarkaana lagu qabtay Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle, ku eedeeyay in uu diiday xalka Galmudug islamarkaana uu raadinayo muddo korarsi taasina aan la aqbali karin sida uu hadalka u dhigay.
Xubnahaan katirsan Baarlamaanka Galmudug ayaa ku kala qaybsan hadalka Madaxweynaha. Mid kamid ah ayaa u arka fal meel ka dhac ah oo loo geestay Madaxweyne Xaaf hadalkii Madaxweynaha Soomaaliya ee Xalay.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Xubnaha Baarlamaanka Galmudug garabka magaalada Cadaado ayaa taageeray hadalka Madaxweynaha waxa uuna sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ka hadlay xaqiiqda Galmudug iyo rabitaanka Xaaf.
“Xaqiiqada ka jirta Galmudug ayuu ka hadlay Madaxweynaha DF-ka, Xaaf waxaa ka go’an muddo korarsi mana suurta galayso” ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo katirsan Golaha Wakiilada Galmudug.
“Waxaan umadda Galmudug iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed u cadeynayaa in Xaaf muddo korarsi rabo Farmaajo ayaana cadeeyay waana taageerayaa hadalka Madaxweynaha DF ka” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cali Ciise oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Xildhibaan Cabdi Gallad oo sidoo kale katirsan Xildhibaanada Galmudug garabka daggan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa qaba in Madaxweyne Farmaajo uu ku xad gudbay dastuurka Galmudug warkii xalayna uu ka been sheegay Madaxweyne Xaaf.
“Ma jirto wax muddo korarsi la yiraahdo laakiin dastuurkaynna ayaa dhigaya in Xaaf 4 sano oo ka bilaabato heshiiskii jabuuti ee Galmudug iyo Maamulkii Ahlusunna sii haayo xilka” ayuu yiri Cabdi Gallad oo katirsan Xildhibaanada Galmudug.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu meel uga dhacay mudane Xaaf, dastuurkaynna waa ka been sheegay” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Gallad oo wareysi siiyay kalfadhi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in waqtiga yar ee u harsan hogaanka maamulka Galmudug looga baahan yahay in ay qabtaan dib u heshiisiin loo sameeyo Shacabka Galmudug si ay go’aan uga gaaraan doorashada ku soo wajahan ee dhamaadka sanandkaan 2019.
War-bixin – Muxuu yahay go’aanka Madaxweyne Farmaajo ee ku aadan xeerka Baarlamanka loo wado ee doorashooyinka?